Factory camshaft fiara, mpamatsy - Mpanamboatra camshaft Car China
Modely azo ampiharina: Volkswagen
modely: 038109101R / 038109101AH
Herin'ny fiantraikany: 1000 （mPa）
Haben'ny fonosana: 500 * 20 * 20
Laharana lahatsoratra: YD358A
Camshafts dia ampahany lehibe amin'ny motera ary mifandray amin'ny crankshaft amin'ny alàlan'ny rojo vy na fehikibo (fehikibo fotoana, rojo famantaranandro), camshafts dia tarihin'ireo camshafts ary koa mifehy ny valves. Ity fifandraisana ity dia mifehy ny rivotra amin'ny fifangaroan'ny solika (rafitra fampidirana nentim-paharazana) sy ny fivoahana amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo soatoavina.
Ny vokatra dia vita amin'ny vy mahery ductile ary voatsabo amin'ny alàlan'ny teknolojia fanamafisana ny tany mba hanatsarana ny tanjaky ny havizanana amin'ny camshaft. Izy io dia mety amin'ny fiara, sambo, fiara enjeniera, milina fambolena, milina mpamokatra generator, kalitao namboarina, manana endrika tsara, hakitroka, malama, famirapiratana ary faharetana aorian'ny famaranana. Ny vokatra tsirairay dia nandalo fitsapana henjana ary azo antoka ny kalitaony. Ny fonosana boaty dia manana endrika tsara sy tsingerina famokarana maharitra: 20-30 andro fiasana, fonosana tsy miandany / fonosana tany am-boalohany, fomba fitaterana: tany, ranomasina ary rivotra.
Ny Camshaft dia mampiasa ireo valves ireo amin'ny alàlan'ny lobes miorina eo amin'ny vatan'ny camshaft, rehefa mihodina manodidina ny tsindry mankany ambany izy ireo. Ny valves dia feno lohataona (azo tsindriana ny rivotra mihetsika) ary miverina amin'ny toerana niaviany, miandry ny fotoana manaraka dia miodina miverina boribory ny lobe, manohy ny tsingerina. Samy misy valizy miditra sy mamoaka rivotra ary amin'ny famolavolana maotera toy ny DOHC (cam overhead ambony) dia mety misy valizy roa isaky ny fidirana na fivoahana.
Azonao an-tsaina fa ny crankshaft dia mifandray amin'ny camshafts amin'ny alàlan'ny cambelt, ary ny camshafts dia mifandray amin'ny valves, izay miasa synergy avokoa. Mandritra ny toe-java-miasa mahazatra, ny mombamomba ny camshaft mahazatra dia azo ampifanarahana amin'ny toetran'ny maotera sasany, saingy misy ny fametrahana sanda miovaova izay afaka manova ny mombamomba ny cam ho an'ny fampiasana fampisehoana- Ny Honda dia fantatra amin'ny teknolojia toy izany.
Ny tsy fahombiazan'ny camshafts mahazatra dia misy ny akanjo tsy mahazatra, ny tabataba tsy mahazatra ary ny vaky. Ny akanjo sy rovitra tsy ara-dalàna dia matetika mitranga alohan'ny tabataba sy fahatapahana tsy mahazatra.
(1) Ny camshaft dia miorina saika amin'ny faran'ny rafitry ny diloilo maotera, noho izany ny toe-javatra fanosorana dia tsy manome fanantenana. Raha tsy ampy ny tsindry famatsian-tsolika noho ny fotoana fampiasana be loatra na antony hafa, na voasakana ny làlan'ny menaka fanosorana, tsy afaka mahatratra ny camshaft ny menaka manosotra, na ny tady mihamafy ny bolt fanamafisana ny cap dia lehibe loatra, ny menaka manosotra tsy afaka miditra amin'ny banga camshaft. Mahatonga ny fitafiana tsy mahazatra an'ny camshaft.
(2) Ny fitafiana tsy mahazatra an'ny camshaft dia hitombo ny elanelana misy eo amin'ny camshaft sy ny trano fitondra, ary hitranga ny famindrana axial rehefa mihetsika ny camshaft, ka miteraka tabataba tsy mahazatra. Ny fitafiana tsy ara-dalàna koa dia hitarika fitomboan'ny elanelana misy eo amin'ny cam cam sy ny tappet hydraulic. Rehefa atambatra ny cam sy ny tappet hydraulic dia hisy fiantraikany ary hiteraka tabataba tsy mahazatra.
(3) Ny camshafts indraindray dia misy tsy fahombiazana lehibe toy ny vaky. Ny antony mahazatra dia misy ny triatra amin'ny paompy hydraulic na ny fitafiana mafy, ny fanosorana ratsy tsy dia tsara, ny camshaft tsy dia misy kalitao ary ny vaky fakan-tsarin'ny camshaft.
(4) Amin'ny tranga sasany, ny tsy fahombiazan'ny camshaft dia vokatry ny olombelona, ​​indrindra rehefa tsy nesorina tsara ny motera rehefa namboarina ny motera. Ohatra, rehefa manaisotra ny fonony mitondra camshaft dia ampiasao marmara hikapohana mafy na hampiasa biriky hialana amin'ny tsindry, na apetaho amin'ny toerana tsy mety ny fonony, ka tsy mifanaraka amin'ny seza mitondra, na ny tady mihamafy ny bolt fastening fonosana mitondra dia lehibe loatra. Rehefa mametraka ny fonony mitondra, tandremo ny zana-tsipìka sy ny laharan'ny toerana eo ambonin'ny fonon'ny fiakarana, ary ampiasao valizy fanamafisam-po mba hanamafisana ny fanamafisana ny firakotra mitondra mifanaraka tsara amin'ny tady voalaza.